I Nebokadnetsara II na Nebokadnezara II na Nabokôdônôzôra II dia mpanjakan'i Babilona tanelanelan'ny taona 605 sy 562 tal. JK. Nitarika ny tafika babiloniana izy rehefa hifarana ny fitondran'i Nabopolasara rainy ka tamin'ny taona 605 dia resiny tao Karkemisa ao Siria ny Egiptiana. Nanafika matetika niankandrefana tany Siria sy Palestina sy Egipta ary Arabia izy. Resiny ny tafik'i Jodà tamin'ny taona 597 tal. J.K. ka azony i Jerosalema ary nentiny ho babo any Babilona ny mpanjaka Joiakima sy ny vahoakany maro koa. Nisy ny fikomiana nanohitra azy tao amin'ny Fanjakan'i Jodà tamin'ny taona 599-587 tal. J.K. ka famaizana mahatsiravina no nasetrin' izany izay nanaovany sesitany Jiosy maro indray tany Babilona. Nataony fahirano mandritra ny 13 taona ny tananan'i Tiro any Foinikia ary nanafika an'i Egipta koa izy tamin’ny taona 568 tal J.K. Maty tamin'ny taona 562 tal J.K. i Nebokadnetsara ka i Avela-Mardoka (na Amela-Merodaka) no nandimby azy.
Amin'ny fiteny babiloniana dia Nabûkudurrîutsur no fiantsoana an'i Nebokadnetsara. Avy amin'ny fitenenana akadiana hoe Nabou-kudurri-usur ny anaran'i Nebokadnetsara. Io dia midika hoe "Ry Nabo, arovy ny lahimatoako !". I Nabo dia andriamanitry ny fahendrena babiloniana sady zanaky ny andriamanitra Mardoka (Marduk). Ny Baiboly hebreo dia manao azy hoe נבכדנאצר / Nebukadné’tsar fa amin'ny teny grika kosa dia Ναβουχοδονόσωρ / Naboukhodonósôr. Ny Arabo manoratra hoe نبوخذنصر / Nibûḫaḏniṣṣar.
Ny Baiboly katolika malagasy dia manoratra hoe Nabokôdônôzôra (manakaiky ny teny frantsay hoe Nabuchodonosor) fa ny Baiboly protestanta malagasy manao hoe Neboladnezara (manakaiky ny teny anglisy hoe Nebuchadnezzar) ary ny Baiboly DIEM manao hoe Nebokadnetsara (manakaiky ny teny hebreo hoe Nebukadné’tsar).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebokadnetsara_II&oldid=975475"
Voaova farany tamin'ny 9 Oktobra 2019 amin'ny 02:36 ity pejy ity.